लीवर खराब हुनुअघि शरीरले दिन्छ यी संकेत, यस्ता लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / लीवर खराब हुनुअघि शरीरले दिन्छ यी संकेत, यस्ता लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता
admin October 8, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 19 Views
काठमाडौँ । भनिन्छ, यदि व्यक्तिले आफ्नो शरीरको ध्यान राखेनन् भने शरीर रोग नै रोगको घर बन्न पुग्छ। त्यसैले आजको समयमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो शरीरको ध्यान राख्नु पर्दछ। खासगरी शरीरको सबै अंग मानवको लागी महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज हामी तपाईलाई यस्तो संकेतको बारेमा बताउने छौँ । जसले तपाईलाई यो पत्ता लगाउन मदत गर्छ कि तपाईको लीवर खराब भएको छ या छैन ।
आउनुहोस् जानौँ आखिर के के लक्षण देखिन्छन् त ?
यदि हाम्रो लीवरमा कुनै प्रकारको खराबी या इन्फेक्सन हुन्छ भने हाम्रो भित्री अङ्ग ठिक तरिकाले काम गर्न सक्दैन । जसको कारणले मानिसलाई अल्छीपन र कमजोरीपन महसुुुस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै पनि काममा मन नजाने हुनसक्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईंको लीवरमा कुनै खराबी छ भने, त्यसपछि आँखाको सेतो भाग पहेंलो हुन्छ। तपाईका नङ् पनि यसै कारणले पहेंलो हुन्छन्। हो, तपाईंलाई जन्डिसको रोग पनि लाग्न सक्छ।
मस्तिष्कमा प्रभाव ।
जब हाम्रो लीवरमा खराबी हुन्छ , लीवरले रगत सफा गर्न सक्षम हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरमा थुप्रै विषाक्त पदार्थहरू जम्मा हुन थाल्छ। जुन रगतको माध्यमबाट हाम्रो दिमागमा पुग्न सुरू गर्दछ। यसले तपाइँको मेमोरीलाई कमजोर पार्न सक्छ वा तपाइँ कुनै निर्णय लिन असमर्थ महसुस गर्नुहुनेछ।
मुखबाट गन्ध आउँछ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, कलेजो खराब छ भने, यस्तो अवस्थामा हाम्रो मुखबाट एक अनौंठो गन्ध आउन थाल्छ। यसको प्रमुख कारण मुखमा अमोनिया बढी रसाउनु हो।
महत्वपूर्ण कुरा, यसले पेटमा पनि नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। हो, कलेजोको विफलताका कारण, पेटले खाना ठीकसँग पचाउँदैन। यसले पेटमा ग्यास, एसिडिटी र कब्जको समस्या निम्त्याउन सक्छ।
Previous ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिक बाट छुटकारा !
Next आहा ! दशैमा घर पुगेकि अनिता यसरी परिवारसग रमाउदै (हेर्नुस् भिडियो )